Isevisi ye-Fahrdienst yaseBasel Limousine & I-Airport Transfer ☆ I-Taxi Basel Airport
I-Basel Airport Transfer & Taxi Basel Airport
Isevisi yokushayela eklasini eyengeziwe, ishibhile futhi ikhululekile kusuka ku-A kuya ku-B. Kungakhathaliseki ukuthi idluliselwa esiteshini sezindiza ngeTekisi iBasel Airport noma isevisi ye-limousine eBasel, senza imisebenzi yethu ngokuthembekile futhi engabizi kahle.
Thintana nathi ngefomu lesicelo sethu noma ushayele u-41 78 861 35 50.
der I-Basel Fahrdienst ukuze isebenze kahle i-limousine isebenzi iBasel neZurich, ukudluliselwa kwezindiza kanye nesiteleka esincane esitokisini saseBasel. Imicimbi, ama-fairs (Art Basel, Baselworld), Imihlangano (WEF Davos,), izikhathi ezikhethekile, ukuhamba ngasese noma kwebhizinisi. Usuhamba ekuseni? Ufika ebusuku noma unemithwalo eminingi? Khona-ke unathi, i Ukudluliselwa kwezindiza Zurich futhi uBasel ulungile nje, wethu I-Taxi Basel Airport ihlala ihamba phambili. yethu I-Basel Airport Transfer Izimoto zingakwazi ukuhlala kubantu abangu-7 nayo yonke imithwalo yakho. Zuza enkonzweni yethu engabizi futhi ekhululekile.
Vele ubale ukuhamba kwakho siqu
CALULULA UMHLABA WESIKHATHI
Izinsizakalo zethu: Ukudluliselwa kwezindiza ngeTekisi iBasel Airport,isevisi Limousine
Service Limousine & Taxi Basel Airport - Nathi wena ukuqhuba best!
Siyakwamukela kusevisi yethu yokudlulisela eBasel! Ingabe uvakashela umuzi, udlula noma ufuna ukudluliselwa ku-Limousine Service Basel noma i-taxi esheshayo yaseBasel Airport? Konke lokhu nokunye okuningi, abashayeli bethu abanobungane, abaqeqeshwe, kanye a izimoto ezikhethekile iyatholakala. Thina umshayeli wezimoto ngaphakathi kwedolobha, njengesibonelo esikhumulweni sezindiza eBasel Baselworld i-Art Basel. Sitholakalayo kumakhasimende ebhizinisi kanye nabantu abazimele. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukubhuka isevisi yethu ye-limousine eBasel nasendaweni eseduzane, kodwa futhi nokuya kwamanye amadolobha isib. Ku-Davos I-World Economic Forum neyethu Isevisi yemoto WEF Davos, Xhumana nathi manje futhi uzivikelele i-limousine ekhethekile eBasel naseZurich!
Service Limousine Basel - Kusuka eBasel kuya eZurich Airport
Basel Njalo izigidi zezivakashi zivela eSwitzerland, eJalimane noma naseGulf States. Akugcini nje ukuthi babhale izigidi eziyisikhombisa ezihlala kulo muzi, futhi bafuna ukuhamba ngeselula. Kusuka ku-A ukuya eB ekudolobheni wesithathu ngobukhulu eSwitzerland, isibonelo, kusukela eBasel kuya eZurich Airport, yilokho iThaxi Basel Airport engakwenza. Idrayivu esuka ehhotela kuya kunoma iyiphi indawo edolobheni noma idluliselwe kwenye idolobha. Noma ngisho nezwe elihlukile! Ngokuqinisekile lezi ziyizenzakalo, lapho izivakashi eziningi zedolobha lethu libhuka inkonzo yethu ye-limousine eBasel. Abavakashi ikakhulukazi nabahamba ngebhizinisi basebenzisa i-shuttle yethu ekhethekile e-Basel noma bafunde inkonzo yethu ye-limousine ngesikhathi behlala eBasel. Kodwa futhi, uma ufuna nje uhambo olungaze lulibaleke, isibonelo njengengxenye yosuku lokuzalwa noma lomshado, hamba kahle nge-limousine service yethu eBasel! Futhi thina ekudluliseleni-basel.ch sinemibandela futhi sinikeza inkonzo yomshayeli ngaphandle kwemingcele. Uma ufuna ukusivumela ukuba sikuqhube kwamanye ama-canton noma amazwe, akuyona inkinga kithi!
Izikhathi ezihle zesevisi ye-limousine / upscale itekisi iBasel Airport
Kodwa, sihlala okokuqala imikhawulo edolobheni Basel sika, phela ngempela indawo 23 amakhilomitha square: Uma kucatshangwa ukuthi uhlala e Basel noma ukuchitha isikhathi esithile lapha, kukhona ezihlukahlukene imicimbi ukubhuka nazo enkonzweni yethu Limousine e Basel. I-Basel yumuzi wesithathu ngobukhulu eSwitzerland futhi ngaleyo ndlela iningi lokunikeza abantu abaningi. Lokhu kuthinta kokubili izakhamuzi, kanye nezivakashi. Uma uvakashela umuzi, kungaba yizizathu zebhizinisi noma ezizimele, ungasebenzisa isevisi yethu yeTekisi Basel Airport njengoba isinyathelo sokugcina edolobheni lethu elihle. Ikakhulukazi esiphakeme osopolitiki, osaziwayo noma abantu ibhizinisi bakwamanye amazwe abafuna ukuqasha Limousine nathi ngoba bayalazisa ngokuqonda futhi isevisi okukhethekile. Ngakho kukhona, isibonelo, ongqongqoshe, kubaphathi bebhange, abaphathi abaphezulu noma osomaqhinga ngubani ukuqasha Limousine nathi Basel futhi uzisebenzise njengezaba okukhethekile Airport Taxi. Basel uyophinde ahlale izinkampani owaziwa, ezifana Novartis, Roche futhi Swiss International Airlines, okuyinto, hlangana nezinye ezinengi, njalo elibamba ephezulu ezingeni lebhizinisi ukuvakashelwa eBasel. Ungathanda ukuqasha i-limousine eBasel ngomcimbi webhizinisi noma uhambo lokubuka indawo eBasel? Ukuze uhambo lwebhizinisi, ungakwazi ukuqasha imoto efanelekile kithi ngesikhathi esifanele endaweni efanele! Lokhu kuyiqiniso nangezingane ekusukeni yangasese, kanye nabantu wangasese Basel ngenxa yezizathu ezihlukahlukene kuwufanele ukuvakashelwa (futhi uma ukubhuka ukuba bafike bevela Zurich ekudlulisweni sezindiza yethu Zurich). Nangu kunjalo Symphonylokho I-Art Museum Basel, the Messe Basel noma, kusukela ku-Customs category, i-Basler Fasnacht nokunye okuningi ukuzwa. Ngaphezu kwalokhu okuvelele kobuvakashi, kunezinto ezivelele ekuphileni lapho itheksi ye-upscale e-Basel imelela umqondo omuhle. Isibonelo, isevisi yethu ye-Limousine nayo iyatholakala emishadweni, izinsuku zokuzalwa noma izikhumbuzo. Ukunqoba ne-Limousine Service Basel, ngesitayela.
Limousines Service Basel - Izimoto zethu enhloko-dolobha yaseCanton
Kungani ungathanda ukuyala i-Taxi Basel ehloniphekile? Ngenxa yokuthi ufuna ukuhamba okukhethekile noma ukuvakasha kwedolobha ngeBasel, ezimotweni eziphezulu, nabashayeli abakwaziyo? Yilokho indlela yethu yeVIP Shuttle Basel, esiyiqinisekisa ngayo ngezimoto ezisenkonzweni yethu ye-limousine. Isevisi yethu yezinga eliphezulu yisekelwe ngokuyinhloko eklasini elingeziwe labakhiqizi bezimoto ezinhle kakhulu. Ukuze siqinisekise uhambo oluphephile futhi olukhululekile, sincike ekwenzeni imoto eyenziwe eJalimane: Njengoba nathi njengenkonzo yakho ye-limousine e-Basel, awukwazi ukufinyelela lapho uya khona. Sifuna uzizwe ukhululekile edolobheni lethu, nomaphi lapho ungahamba khona. Lena yindlela enhle yokuzihlukanisa namathekisi, ngoba asikhuthazi kuphela, singumsebenzi we-limousine. Ngakho-ke, sisebenzisana nezimoto ezisezingeni eliphezulu, ezithembekayo nezinga eliphezulu:
• Igumbi le-Mercedes E
• Inqola yama-Mercedes E ekilasini
• I-Mercedes Viano (izihlalo ze-8)
• I-Mercedes S-Class
• I-VW Passat isakhiwo
Izimoto ezisenkonzweni yethu ye-limousine zifanelekile kokubili ukudluliselwa kwabantu ngabanye, njenge-shuttle kuphela yezindiza noma ukuhamba ngamaqembu amakhulu. Kuzo zonke izidingo sinemoto engcono kakhulu "ekuqaleni". Sithatha amaklayenti ethu yonke indawo futhi siyithatha yonke indawo, lokho kungenye yama-maxims ekudlulisweni komsebenzi-basel.ch.
Ukuthuthwa kwezindiza ze-Taxi Basel - Akukhona nje ukusuka eBasel kuya eZurich Airport
Akufanele ngaso sonke isikhathi kube "nje" itekisi yaseBasel Airport - isiphephelo sethu seVIP sizokuthatha lapho uthanda khona. Ake ucabange nje ukuvakashela iBasel, kodwa iSwitzerland yonke. Ungathanda ukuhanjiswa ezindiza zeZurich kanye nokudluliselwa kwesikhumulo sezindiza eBasel noma ukushayiswa eBern? Yiqiniso, siphinde sinikeze lo mshayeli wezimoto emotweni yethu ekhethekile. Kodwa hhayi nje kuphela lokho, isevisi yethu ye-limousine isebenza emhlabeni wonke, uthanda ukuhamba uhambo lwe-70km kuphela ukusuka eFreburg eJalimane, eStuttgart noma eMunich. Futhi i-Liechtenstein, i-France, i-Italy noma iFrance yizindawo ezingenzeka ukuthi ungakwazi ukuzisebenzela nge-international limousine service yethu.
Emimousini yethu ekhethekile ngeke uphelelwe lutho, ungaduduzi noma ukuphepha. Apropos: Bonke abashayeli bethu abonakali ngokuhlakanipha kwabo kuphela, kodwa nangendlela yabo yokushayela ehlakaniphile. Yiqiniso lokho akusho ukuthi awukwazi ukwenza ama-aphoyintimenti ngesikhathi. Abashayeli bethu bajwayele imithethonqubo yomgwaqo kokubili emadolobheni nasezindaweni ezide zokuhamba emakhaya emazweni ahlukene futhi kuzokuthatha njengesikhashana ngokuphepha ngokuya endaweni oyifunayo.
Ithimba lakho leTekisi iBasel Airport